SULFIL ACID (CAADIGA, SALAAR) - FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA, SIFOOYINKA FAA'IIDO IYO KHILAAFAADKA, U ISTICMAALKA CUNTO KARINTA IYO DAAWADA DHAQAMEED - SOOSAARKA DALAGGA
Sorrel dhanaan: waxa ku jira, waxa faa'iido leh, sida loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka
Kalluunka, caadiga ah ama sorrel salad dhowr qarniyaal ka hor waxaa loo tixgeliyey warshad caws iyo jarjar ka soo jardiinooyinka dhulkeena. Waxay bilaabeen in ay ku daraan cuntooyinka dhawaan, iyo, si kastaba ha ahaatee, sorrel leeyahay noocyo badan oo bogsiinaya, sidaas waxaa loo isticmaalaa labada karinta iyo qurxinta dadka.
Faa'iidada weyn ee warshadda waa in ay u muuqato mid ka mid ah ugu horeysay ee guga, iyo, thanks to vitamin taajirkeeda hodanka ah, waa alaabta aad u qiimo badan inta lagu jiro mudada guga avitaminosis.
Waa maxay farqiga u dhexeeya sorrel dhanaan (lettuce) iyo faras?
Labada dhirba waxaa iska leh qoyska Buckwheat, waa cows, dhirta dilka ah. Guud ahaan, waxaa jira in ka badan 150 nooc oo sorrel ah meeraha, laakiin ku dhowaad dhammaantood aan loo isticmaalin cunto iyo haramaha. Kaliya laba nooc ayaa si weyn loo yaqaan: faras iyo sorrel caadi ah. Waxay ku kala duwan yihiin cabbirka, midabka, dhadhanka, taas oo si faahfaahsan looga hadlay miiska. Horse iyo xayawaanka caadiga ah waa geedo isbeddel ah, taas oo ah, waxay ku noolyihiin meelo badan oo adduunka ah, waxay ku badan yihiin qaaradaha qaar, oo aan la qabin xaaladaha.
Astaamaha - Salad Salad - Sorrel
Midabka caleen - Cagaar cagaaran - Cagaar mug leh xididdada gaduudan
Cabbirka dhirta - Xididu waxay gaartay 1 m, caleemuhuna way toosan yihiin, ilaa 15-20 cm dherer ahaan - Warshad Tallaab ah (illaa 150 cm) oo leh dherer, qoyan, caleemo qaro weyn ilaa 25 cm dherer
Dhadhami - Iyada oo dhanaan - Iyadoo qadhaadh
Isticmaalka Cuntada - Si buuxda ayaa loo dabaqay - Dalbaday, laakiin waa yar tahay
Labada dhirta waxaa loo isticmaalaa karinta iyo bogsiinta dadka, iyo sorrel faras badan ayaa loo isticmaalaa sida qalabka bogsashada.
Ma taqaanaa? Cafiska dhexdiisa, sorrel fuushan ayaa loo isticmaalaa cuntada, taas oo loo yaqaan aneluk halkaas. Waxaa loo isticmaalaa oo kaliya foomka qalalan, sida ka dib markii qalajiyo dhirta lumiso qadhaadh ay sabab u halsano. Caleemaha cirridka Horse waa la qalajiyey, lafdhabaxay xayawaanka asalka ah, ka dibna ku jiraa ubaxyo, iyo foomkan waxaa lagu kaydiyaa dhawr sano oo jawaanno ah.
100 g geedka waxaa ku jira celcelis ahaan 20 kcal. Saameynta BZHU iyo walxaha kale ee sorrel waa sida soo socota:
borotiinka - 1.5-2 mg;
dufanka - 0.3-0.4 mg;
carbohydrates - 2.5 mg;
ash - 1.4 mg;
biyaha - 91 g;
Fiber - 0.8 mg;
acid acids - 0.7 mg.
Waxaa ka mid ah asiidhyada organic ee ka kooban qayb ka badan: oxalic, maley, citric, kafeega, kaas oo siiyaan dhirta a dhadhan wacan, dhanaan. Acids waxaa laga helaa caleemaha iyo qoyaanka cawska. Root waxa ku jira fareerka iyo walaxaha anthraquinone.
Faytamiin iyo macdanta macdanta ee dhirta waa sida soo socota:
Vitamin E - 1.9 mg
Vitamin K - 0.6 mg
Vitamin B3 - 0.5 mg
Vitamin B5 - 0.25 mg
Vitamin B9 - 35 mcg
Vitamin A - 2.5 mcg
Potassium (K) - 362 mg
Phosphorus (Ph) - 71 mg
Chlorine (Cl) - 70 mg
Calcium (Ca) - 54 mg
Magnesium (Mg) - 41 mg
Sodium (Na) - 4 mg
Sulfur (S) - 20 μg
Iron (Fe) - 2.4 mg
Zinc (Zn) - 0.5 mg
Copper (Cu) - 0.2 mg
Fluorine (F) - 70 μg
Iodine (I) - 3 mcg
Maxay yihiin waxyaabaha ay ku dheehan tahay iyo sida hoos u dhac ku yimaada cudurada
Geedhu ma aha oo kaliya dhadhan qurux badan, dhadhan, laakiin sidoo kale guryaha badan oo faa'iido leh ee jirka. Sidaa darteed, isticmaalka sorrel waxay yeelan kartaa saamayn sida:
bogsashada dhaawaca iyo raadiyaha;
Ma taqaanaa? Xaqiiqdii, sorrel waa caws, laakiin miisaanka warshadaha waxaa lagu koray sidii qudaar. Markii ugu horraysay ee qoraallada sorrel laga soo bilaabo qarnigii laba iyo tobnaadna waxaa laga helay waraaqo Faransiis ah: halka ay awoowayaasha iyo taliyayaashu fursad u heleen in ay ku cunaan cawska cagaarka, halka wadamada kale ee Yurub, sorrel loo tixgeliyey cayayaanka muddo dheer. Faransiiska, warshadani waxay ku jirtaa kalsooni aad u sareysa waxaana loo tixgeliyaa hantida qaranka.
Intaa waxaa dheer, qalabyada ku saleysan xididada iyo caleemaha geedka waxaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo dheefshiidka, hawlgalka beerka, hagaajinta dhiigga, si loo yareeyo muujinta xun ee dhalmada ee dumarka. Cawska guga wuxuu ka caawiyaa sarkhaanida iyo sumowga, waxaa loo isticmaalaa sida liddi kufid. Sorrel waxaa loo isticmaalaa sidii qalab dheeraad ah ee cudurada sida:
dhiigbax: uterine, samboor, iyo xannuunno;
calaamadaha calaamadaha horay loo yaqaan 'premenstrual syndrome';
bararka sanka (sanboorka, sinusitis);
Sidoo kale, antritis waxaa lagu daaweeyaa tinctures marigold iyo propolis, kalanchoe, beeswax.
calool-galinta iyo shuban, colitis, cudurada dheefshiidka;
cudurrada maqaarka (oo ay ku jiraan kuwa xasaasiyad ka qaba): finanka, cuncunka iyo cuncunka, gubashada, furunculosis, dermatitis, boogaha;
cudurada afka iyo hunguriga afka: dhuun xanuun, stomatitis, xanjo xanjo.
Acids ee dhirta this kordhiyo rabitaanka cuntada, kicin digestion, baabi'in halsano iyo qulqulaya hababka ee mindhicirka, taas oo ka dhalatay taas microflora hagaajin. Sorrel waa antioxidant xoog leh, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa ka hortagga iyo xakameynta kansarka. Guud ahaan, warshad cagaarsho ah waxay leedahay tufaax, xoojinta iyo bogsashada saameynta jirka oo dhan.
Inkasta oo liiska hantida faa'iidada leh iyo isticmaalka baahsan, waa muhiim in la ogaado in aad cuni kartid alaab iyo adeegso alaab ku salaysan inta lagu jiro mudada noloshiisa gaarka ah: markaad qaadayso ilmaha iyo nuujinta, iyo sidoo kale cudurro halis ah.
Waa muhiim! Wixii jirka jirka caleemaha yar yar ee faa'iido leh ee sorrel, kaas oo content of acids iyo walxaha kale ayaa u fiican. Dhamaadka xagaaga, caleemaha cawska waxaa ku jira xaddiga sare ee oxalic acid, taas oo tiro ahaanba ay noqon karto mid waxyeello leh.
Dhakhaatiirta iyo nafaqadu waxay ku doodaan in inta lagu jiro xilliga ilmanka leh alaabtan ay tahay inay taxadaraan, xitaa haddii aad rabto inaad caleenta u darsatid, waxaa wanaagsan in aad siisid qadarka liinta. Xaqiiqdu waxay tahay in badeecadani ay kor u qaaddo shaqada kelyaha, taas oo inta lagu jiro uurka ay horeyba u jirtaa walwal.
Weligaa ha qaadin sorrel haddii haween uur leh laga helo cudurka urolithiasis, bararka caloosha iyo mindhicirka, gout.
Haddii aad dhab ahaantii aad rabto inaad sorrel cuno, waa inaad u isticmaashaa cuntooyinka caanaha leh, tusaale ahaan, labeen dhanaan. Hase yeeshee, waxaa marka hore la isku talinayaa in lala tashado takhtarka hogaaminaya uurka.
Su'aashaan, sida mid hore, weli ma haysto hal caafimaad oo keliya. Khubarada qaarkood waxay ku doodaan in sorrel ay sababi karto kalyo-xumada ilmaha ee mustaqbalka, laakiin aragtidan lama xaqiijin cilmi-baaris.
Khatar kale ayaa ku jirta xaqiiqda ah in sorrel uu kicin karo falcelinta xasaasiyadda. Waa inaad joojisaa isticmaalka dhalatada haddii ilmahaagu leeyahay calaamadahaas: finan, casaan, cuncun, hindhiso, barar iyo jeexis. Hase yeeshee, khubarada intooda badani waxay u oggolaadaan isticmaalka sorrel ee HB, laakiin waa inay u hoggaansamaan dhowr xeerar:
waxaad cuni kartaa caleemaha casiir ah 1-2 jeer toddobaadkii;
haddii ay dhacdo in lagu xadgudbo mareenka caloosha iyo mindhicirka, sheyga waa in si kulul loo baaraandego;
dooran kaliya cuntada cusub oo tayo sare leh, cagaarka ugu weyn ee lagu beeray sariiro beerahooda;
U hubso inaad si fiican u biyo raaciso isticmaalka ka hor.
Iyada oo loo marayo noocyadan nooca I iyo nooca II, sorrel ayaa loo oggol yahay isticmaalka keliya haddii aysan jirin wax ka horjeeda sheygan. Maaddooyinka firfircoon ee cawska guga ayaa ah mid hodan ku ah caawimada ay xakamayso heerarka sonkorta. Sidoo kale sorrel waa faa'iido badan miisaanka, kaas oo ah saaxiibka joogtada ah ee dadka sonkorowga qaba.
Sorrel waxaa loo isticmaali karaa labadaba cusub (taas oo ah mid aad u fiican), iyo qayb ka mid ah suxuunta ugu muhiimsan, suxuunta dhinaca.
Waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah inaad barato sida loo isticmaalo marka la isticmaalo diabeteska: marigold, Jerusalem artichoke, yuqua, cornel, cawska cawska, cagaarka cagaaran, kaabajka Chinese, beertii beertii.
Gout waa xanuun wadajir ah oo sababa qadiimooyin cusbo ah. Markii hore, cudurkan waxaa loo yaqaan "cudurka boqorrada", sababtoo ah sababaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen cunnooyinka cuntada (badanaa xoolaha asalkoodu yahay: hilibka iyo kalluunka) iyo cabitaanka khamriga.
Gout waa alaabta adag ee ka hortagga, content ee kaas oo ah boqolkiiba sare ee oxalic acid, taas oo jirka ku jiraa foomamka xashiishka calcium. Maadaama maaddadani ay tahay midda ugu muhiimsan ee sorrel, waxaa suurtagal ah in cawska loo isticmaalo nooc kasta iyo xajmiga cudurkan.
Si loo isticmaalo sorrel ee daawada dad, abuurka, caleemaha iyo xididdada ayaa la goostay. Qaadida alaabta ceeriin ah waxay soconaysaa laga bilaabo Bisha 5aad ilaa bartamihii Juunyo, sida caleemaha dhirta ayaa sarreeya leh asiidh. Ururi sorrel waa in ay ahaato mid qalalan oo qorrax leh, ka dib markii dharabku dhacay.
Talooyin yar oo ku saabsan sida loo ururiyo loona qallajiyo qaybaha kala duwan ee geedka:
Leaves. Waa lagama maarmaan in la jarjiyo maqaarka ama mindi 3 cm dhulka, ma maydhin, laakiin kaliya si loo kala saaro oo laga saaro jaalaha, qalalan, caleemo waxyeelo ah. Kadibna waa la xirxiraa oo qolka la seexan karaa, oo la qalajiyey warqad ama nadiif ah. Iyadoo hababka kor ku xusan ee qalajinta walxaha ceeriin waxay diyaar u noqon doonaan 1-2 toddobaad. Waxa kale oo lagu qalajin karaa foornada ama qalajiyaha korantada heerkul ah +40 ° C
Seeds. Bisaylka abuurka wuxuu dhacaa bisha Juun. Kareemaha bislaado waxay noqonayaan bunni ama bunni. Waa mid aad u muhiim ah in aan la seegin xilligaas isla markaana gooyo inflorescences waqtigeeda, haddii kale miraha badankood way u qulqulayaan. Iska yaree saqafyada waxay u baahan yihiin si ay u gooyaan calaacalaha si ay u burburiyaan ubaxyada la qalajiyey, iyo dharbaaxo dabaysha. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa hab kale: Ku shub ubaxyada la qalajiyey oo biyo ah muddo yar, ka dibna ku xoq gacmahaaga si aad biyaha u kala qaaddo miraha, ka dibna dhex mari shaandho - miraha ayaa ku sii jiri doona. Waxay u baahan yihiin in la qalajiyo (maaha qorraxda tooska ah).
Rootiyada. Guud ahaan, xididdada warshadda fardaha waxay ku xiran tahay midho goosashada. Waxaad u baahan tahay inaad iyaga soo ururiso inta lagu jiro xilliga ubax - laga bilaabo Bisha May ilaa Luuliyo. Xididdada waa in si taxaddar leh loo qodo, laga nadiifiyo dhulka, maydhin, gooyaa qaybo badan. Qallajinta waxay ku dhacdaa qol qallalan oo qalalan.
Waa muhiim! Marka qalajinta caleemaha looma oggola inay xadiddo, marka cawska cagaaran ee si fudud loo burburiyo budada.
Baqshiishyada waa in lagu keydiyaa boorsooyinka dharka leh, sanduuqyada kartoonada ama muraayadaha (daboolka waa in aan si adag loo xirin!), Meel qallalan, oo laga ilaaliyo qorraxda tooska ah. Xaaladaha isticmaalka alaabta ceeriin ah waxay noqon kartaa 3 sano. Nidaamka qalajinta ayaa loo tixgeliyaa dhamaystiran haddii caleemaha qallafsan iyo rogrogasho.
Isticmaalka cunnooyinka, sorrel waa la qaadi karaa cusub, la qalajiyey, barafoobay, cusbada iyo xitaa qasacadeysan.
Akhri wax badan oo ku saabsan hababka sorrel goosashada jiilaalka.
Qalabeynta, waxaad isticmaali kartaa habka aan kaga doodnay cutubkii hore. Hababka soo hara waxaa loo tixgelin doonaa faahfaahin dheeraad ah:
dhaxan. Iyada oo habkan, nolosha shelf ee sheyga waa ilaa hal sano. Sorrel waa in la dhaqo, la jarjarey, haddii la doonayo, waxaad isticmaali kartaa afkoda. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad dooratid mid ka mid ah siyaabaha: si aad u ururiso cawska jarjaran ee bacaha balaastigga ah ama ku jiifso wax lagu dhajiyo barafka oo lagu daro 1 tsp. biyaha ku jira cube kasta. Ka dib marka dhirta la xiro, bacaha waa in la saxiixaa, oo tilmaamaya magaca shaqada, bilaha iyo sanadka diyaarinta, maaddaama ay adkaan doonto mustaqbalka si dhakhso ah u kala saaraan sorrel qaboojiyaha la qaboojiyey ee dill ama arugula;
Caanaha. Qaab aad u fudud oo ay ku shaqeyneyso mashiinada ilaa 2 sano. Cawsku wuxuu u baahan yahay in la xalliyo, si fiican loo dhaqo oo la jarjarey. Dhibicirta dhalooyinka, ka buuxi cagaarka, ku dar milix (0.5-1 tsp ilaa saxan nus litir) iyo ku shub biyo karkaraya;
salting. 30 garaam oo cusbo ah ayaa loo isticmaalaa 1 kg caws. Greens u baahan tahay in si fiican u maydheen, la qalajiyey oo la jarjarey. Cusbo dheeraad ah ayaa lagu daraa si taxaddar lehna dhulka. Foomkan, alaabta ceeriin waa in la tagaa dhowr saacadood si loo sameeyo casiir. Maaddooyinka nadiifka ah waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo dhajiyo cagaarka oo xiro daboolka nacon. Foomkan, qaybta shaqada waxaa lagu kaydiyaa 1-2 sano.
Hababka ugu muhiimsan ee xilliga qaboobaha xilliga jiilaalka waxaa ka mid ah qalajinta iyo barafka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida jiilaalka cagaaran sida cagaarka, basasha cagaaran, dill iyo arugula.
Foomka cusub ee dhirta waxaa loo isticmaalaa saladh, casiir cagaaran iyo suugo, suugo. Greens waxaa loo isticmaalaa koorasyada koowaad iyo labaad, maraq khudradda, sida buuxinta dubista. Waxa kale oo aad abuuri kartaa maraqa, suxuunta dharka, cunto fudud iyo suugada oo ka yimaada meelaha banaan.
Warshadu waxay si fiican u dhammaystirtay hilibka iyo kaluunka kaluunka, waxay si fiican u socotaa geedo kale, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, ukunta iyo firileyda. Cunnooyin badan oo adduunka ah, sorrel waa badeeco aad u jecel, tusaale ahaan, Faransiiska iyo England.
Isticmaal ujeedooyinka daaweynta: daawo dhaqameed
Ka fikir sida loo diyaariyo daaweynta cudurada kala duwan oo ku saleysan sorrel caadi ah iyo faras.
Iyada oo cune xanuun leh marka la dhaqayo
Si aad u biyo raaciso cunaha waxay u baahan doontaa inay tuujiso casiir ka caleemaha cusub ee sorrel dhanaan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku jajabisaa cagaarka boqoshaada kadibna tuujin juuska iyadoo loo marayo faashadda. Ma aha in aad isticmaasho juicer ama Booqday Furimaha Dagaalka hilib, sida acids xiniinyaha gardarro leh waxay lumi kartaa qalabka. Casiirka waa in la kariyaa 5 daqiiqadood waxaana la qaadaa 3 jeer maalintii cunto. Sidoo kale u diyaargarow qallafinta qashinka. At 1 tbsp. l qalabka cayriin waxay u baahan yihiin 400-500 ml oo biyo ah. Maraq la dhalaalay kuleylka hooseeyo 1 daqiiqo oo la qaboojiyo. Waxaad ku tirtiri kartaa tiro aan xadidnayn, ugu yaraan - 6 jeer maalintii.
Iyada oo kudka
Xanuunkan, qaybta xididka ee sorrel faras ayaa loo isticmaalaa. Qalabka wax lagu kariyo ayaa u baahan doona:
1 tbsp. l qalabka cayriin;
Biyo diirran, isku karkari oo ku sii daa kulayl yar 15 daqiiqo oo kale, ka dibna qabow iyo cadaadis. U qaado baahida qiyaasta ilaa 5 jeer maalintii. Qalabka wuxuu wax ku ool yahay maaha kaliya cagaarshowga, laakiin sidoo kale qanjidhada, noocyada kala duwan ee colitis.
Dhibaatadani waxay sidoo kale khusaysaa qalabka cayriin ee cawska cawska. Waxaad samayn kartaa decoction ama faleebo:
decoction. U diyaargarowga aaladda jilicsan ee xoogga leh: 1 tsp. xididdada la jarjaray waxay u baahan tahay 1 litir oo biyo ah. Awoodda leh maraq waa in lagu hayaa barkadda biyaha 15 daqiiqo. Ha u oggolaan in maraqu si weyn u karkariyo. Waqtigaas ka dib waxaad u baahan tahay inaad cadaadiso oo aad qaboojiso qalabka. Qaado 2 maalmood 1/3 koob oo ah cuntada ka hor;
faleebo. Qalabkan waa in lagu diyaariyaa heerkulbeeg. At 1 tbsp. l caleemaha qallalan waxay u baahan doonaan galaas biyo ah. Ku qoy darmuuska ilaa 12 saacadood, daadi. Qaado inta lagu jiro maalinta kabbaha yar.
Daaweynta shubanka leh daawooyinkaan waa inaysan ka badneyn 2-3 maalmood. Fududeynta iyo sifaynta faraska faraska ayaa si fiican ula qabsan kara shubanka, sidoo kale soo celiya dheecaanka mindhicirrada, caadiyan microflora.
Haddii xanuunka mandheerta la dhaafo, faleebo sorrel ah ayaa si wax ku ool ah ula tacaalaya dhibaatadan. At 1 tbsp. l qalajinta alaabta ceeriin ah waxay u baahan doontaa 300 ml oo biyo ah. Waxyaabaha qashinka ah waxay u baahan yihiin inay ku seexdaan biyo karkaraya, isku kari ilaa kulayl yar ilaa 15 daqiiqo oo ka saar.
Daawooyinka dhirta laga bilaabo waqtiyadaas waxaa isticmaala dadka si loo daaweeyo cudurrada xubnaha iyo lafdhabarta. Baro sida loo isticmaalo daaweynta: Jinka, dharka, gogosha dayrta, basbaaska kulul.
Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad weelka ku dhejisid faleebo si adag u qabo kuna hayso 2 saacadood. Qaadashada daawadan waxaa lagula talinayaa 2 tbsp. l kahor quraac, qado iyo casho.
Cudurka dabaysha, antibacterial, anti-inflammatory iyo walxaha dabiiciga ah ee cagaarka ayaa loo isticmaalay cystitiska. Si loola dagaallamo cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato barkada leh decoction ah caleemaha sorrel for 1 asbuuc. Waa lagama maarmaan in la diyaariyo 1 qayb oo ka mid ah walxo cayriin ah, 2 qaybood oo biyo ah, isku dar, macaankuna waa 10 daqiiqo, u diyaarso in muddo ahna ku daadi marinka qubeyska. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato ugu yaraan 10 daqiiqo.
Asaasiga dabiiciga ah ee badeecadu leedahay bakteeriyada, anti-bararka iyo guryaha tonic, sidaa daraadeed dhirta waxaa loo isticmaalaa cuduro badan oo maqaarka ah. Sorrel waxaa loo isticmaali karaa gudaha iyo dibadda.
Tixgeli dhibaatooyinka iyo cuntooyinka ugu caansan:
decoction saladh sorrel - 50 ml;
ciir cagaaran (ama wax kale) - 2 tbsp. l.
Casiirka aloe - 1 tsp.
Karsado maraq at heerka of 1 tbsp. l on galaas biyo ah, isku kari ilaa 10 daqiiqo, qabow iyo cadaadis. Qaado qadarka cayiman ee maraq ah, ku dar juice iyo dhoobo, qaso, codso maqaarka caadka leh 10 daqiiqo, ka dibna raaci.
xididdada sorrel faras - 2 tbsp. l.
Diyaarso faleebo, qaadashada quraacda iyo qadada 1 koob. Koorsada daaweyntu waxay socotaa ilaa usbuuc. Cagaarshow, cuncun, cambaar
caleemaha cusub ee sorrel faras - 1 tbsp. l.
karkaraya - 1 koob.
Ku shub biyo karkaraya walxo cayriin, ku adkeyso 30 daqiiqo, cadaadis. Qaado quraacda, qadada iyo cashada 50 ml. Faleebo waxaa loo isticmaali karaa cadaadiska iyo looska.
Cudurrada iyo xaaladaha badeecadani waa in la iska daayaa:
gout, arthritis, rheumatism;
cudurada kalyaha (dhagaxyada, geedi socodka bararka);
Markaad isticmaasho sorrel, xitaa dadka caafimaad qaba waxay u baahan yihiin inay ilaaliyaan dhexdhexaadinta - si wanaagsan ugu dari cagaarka cuntada aan ka badnayn 2-3 jeer usbuucii. Sidoo kale, haddii ay suurtagal tahay, ha soo bandhigin alaabta si loo daaweeyo daaweynta, maadaama geeddi-socodka uu soo saaro xeryahooda astaamaha ah ee aan laga saarin jirka. Xad-gudubka cagaarka cagaaran wuxuu keeni karaa cudurro daba-dheeraada ee mareenka caloosha iyo mindhicirka, habka kaadida. Ma jiro wax qiimo leh oo la cuno caleemaha hore ee warshad la bixiyay (oo la ururiyey qeybtii labaad ee xagaaga).
Laga soo bilaabo carruurnimada, caleemaha caansan, caleemaha dhadhan fiican leh waa kaydka walxaha qiimaha jirka. Si aad uga faa'iidaysato badeecada guga sannadka oo idil, waxaad codsan kartaa noocyo kala duwan oo banaan. Sorrel wuxuu siin doonaa suufka cusub, iyo haddii ay dhacdo dhibaatooyin caafimaad waxay u imaan doontaa gargaarka qoyska oo dhan.